Vashandi veHurumende Voenderera Mberi neKuramwa Mabasa
Kukadzi 08, 2010
Vashandi vehurumende muhHarare vakakanda mapadza pasi neChishanu mushure mekunge vawirirana kusaenda kubasa kudzamara hurumende yawedzera mari dzavo.
Sangano rinomirira vashandi vose vehurumende, rePublic Service Association (PSA) rinoti vashandi vose havafanirwe kuenda kubasa kudzamara hurumende yawedzera mari dzavanotambira.
Vashandi vehurumende muHarare vakakanda mapadza pasi neChishanu mushure mekunge vawirirana kusaenda kubasa kudzamara hurumende yawedzera mari dzavo.
Hutungamiri hwesangano revashandi vehurumende hwanga huri muBulawayo neMuvhuro huchiita misangano nevashandi. Musangano wemuBulawayo wawiriranawo kuti vashandi vose vehurumende vasaende kumabasa kusvikira hurumende yawedzera mari dzavari kuda kutambiriswa.
Vashandi ava vari kuti vanoda kutambiriswa mari inotangira pamazana matanhatu nemakumi matatu emadhora eku America pamwedzi.
Asi hurumende inoti haina mari iri kudiwa nevashandi. Studio7 yatadza kubata gurukota rezvevashandi vehurumende, VaEliphas Mukonoweshuro, sezvo vanga vasingadaire nhare yavo.
VaJohn Tagara ndivo mutungamiri we PSA. VaTagara vanoti muZimbabwe mune hupfumi hwakawanda, nokudaro hurumende inofanirwa kutambirisa vashani vayo mari inoenderana nekudhura kuri kuita hupenyu. Vapa semuenzaniso mangoda enyika, ayo ari kuenda kuhomwe dzevanhu vashoma, nyika ichitambura.VaTagara vati vakambopa hurumende nguva yekuti igadzirise zvinhu, asi zviri kuratidza kuti iri kukundikana.
Zvichitevera kuramwa kuri kuita vashandi vehurumende, kumahofisi anotorwa zvitupa nemapasipoti muHarare kwanga kuine mitsetse yakareba, pasina vanhu vanga vachibatsira vanhu, ukuwo vashandi vashoma vanga vari pabasa, vanga vakagara zvavo vachishandisa nhare.
Muzvikoro zvizhinji zvehurumende muHarare, vana vaswera vachitamba zvavo sezvo varairidzi vanga vasingadzidzise, uye vazhinji vavo havana kuenda kubasa zvachose.
Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions, (ZCTU), rinotiwo riri kutsigira kuramwa mabasa kuri kuitwa nevashandi vehurumende.
Vakafanobata chigaro chemunyori mukuru muZCTU, vaJaphet Moyo, vaudza Studio7 kuti sangano ravo riri kuda kuti mushandi wese atambire mari inomukwanira.
Mune imwewo nyaya ine chekuita nekuramwa mabasa kwevashandi vehurumende, kutongwa kwenyaya iri kupomerwa mubati wehomwe muMovement for Democratic Change, MDC, vaRoy Bennett, kwatadza kuenderera mberi nhasi, zvichitevera kuramwa mabasa kuri kuitwa nevashandi vehurumende.
Va Bennett vari kupomerwa mhosva yokuronga zvokupidigura hurumende yaVa Robert Mugabe pasati paumbwa hurumende yemubatanidzwa, pamwe nokukurudzira zvohugandanga.
Mutongi wedare repamusoro, VaChinembiri Bhunu, vambomisa kunzwikwa kwenyaya iyi, vachiti vazarirwa nerwizi, sezvo vamwe vashandi vemumatare edzimhosva, vasina kuuya kubasa zvichitevera chiziviso chakaitwa nevanotungamira masangano anomirira vashandi vehurumende, chokuti havasi kuzoenda kubasa kusvikira vawedzerwa mari dzavanotambira.
Va Bhunu vati vachazozivisa magweta ehurumende, pamwe nemagweta aVa Bennett, kuti nyaya iyi inokwanisa kuzonzwikwa rinhi.
Hurukuro naVaJohn Tagara